Voan’ny covid-19 tonga aty Iarivo Hanjakan’ny gaboraraka sy kolikoly ny RN2
Mahatalanjona ny fisiana olona 15 avy any Toamasina tratry ny coronavirus tonga aty Antananarivo Renivohitra.
Fepetra noraisin’ny fanjakana anefa ny tsy fahafahana mivezivezy miala amin’ireo faritra 3 misy ny coronavirus dia Analamanga, Matsiatra Ambony, ary Antsinanana. Mbola tafiditra aty an-dRanivohitra ihany ny olona am-polony mahery avy any Toamasina, izay heverina fa mbola mihoatra an’ireo fa ireny aloha ny tratra. Iza no tompon’andraikitra tamin’ny goragora? Efa niaka-pofona ny Filoham-pirenena ny resaka fivoahana avy ao Ambatovy fony izy tany Toamasina ny 7 mey. Inona no andraikitra ny mpitandro filaminana amin’io resaka goragora any amin’ny RN2 io. Ny tao Moramanga dia nalaza ny resaka jono botry ataon’ny fiara sasany izay 30 000Ar no saran-dàlana, ary ahiana ho nisy tahaka izany ihany koa avy any Toamasina, izay samy tao anatin’ny RN2 rahateo. Ny Pr Vololontiana Hanta omaly dia naneho 150 000 Ar hatramin’ny 200 000 Ar ny famarotana ny fahazoan-dàlana manokana hivezivezy, izany hoe tena misy kolikoly lehibe. Asa hisy ve ny fanasaziana ho an’ireo tompon’antoka na ny mpanao kolikoly na ny mpanara-maso tsy nahavita ny andraikiny?